जाडोमा एलर्जीबाट कसरी बच्ने ? – Taza Post
जाडोमा एलर्जीबाट कसरी बच्ने ?
जाडो बढेको छ । एलर्जीले पनि कतिलाई दुःख दिएको होला । जाडो र एलर्जीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने लाग्छ हामीलाई । तर, जाडो नै एक त्यस्तो समय हो, जतिबेला मानिसलाई एलर्जीको समस्या धेरै हुने गर्दछ । जाडोमा हुने यस्ता एलर्जीले स्वास्थ्यमा पनि भिन्नै प्रकारको समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
वल्ड एलर्जी अर्गनाइजेशनले एक गरेको एक अध्ययन अनुसार भिटामिन सीले इन्फ्लामेशन र एलर्जीको प्रतिकि्रयालाई कम गर्छ । यसबाहेक, एलर्जिक राइनाइटिस कम गर्नमा भिटामिन सीबाहेक भिटामिन इ र माछाको तेलले पनि जादू जसरी काम गर्छ ।(source)
Previous तीन तरिकाः थाइराइड यसरी निको हुन्छ
Next कलिला बालबालिकामा किन हुन्छ उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्या ?